Wasiirka Kalluumaysiga Iyo Khayraadka Badda Puntland oo kormeeray deegaano Hoosyimaadda Gobolka Cayn. – Radio Daljir
Wasiirka Kalluumaysiga Iyo Khayraadka Badda Puntland oo kormeeray deegaano Hoosyimaadda Gobolka Cayn.
Abriil 11, 2010 12:00 b 0
Buhodle, Galkacyo 11 – Iyadoo Mudooyinkii u danbeeyey Gobolka Cayn ay kormeer ku marayeen wafti uu hogaaminayo Wasiirka Wasaaradda Kalluumaysiga Iyo khayraadka Badda Dawlada Puntland Eng Maxamed Faarax Aadan ayaa Maanta waxay kormeer ugu baxeen magaalooyin hoos yimaada magaaladda Buuhoodle ee xarunta gobolka cayn.
Waftigan uu hogaaminayo Wasiirka Kalluumaysigu, oo ay ka mid ahaayeen Maamulka Gobolka Cayn,Midka Degmadda Buuhoodle,Taliyayaasha Laamaha amaanka ee gobolka, ayaa ugu horayn waxay gaareen deegaanka Dan-Dan oo Hilaadii 25 Km dhanka Bari kaga Beegan Magaaladda Buuhoodle halkaasi oo siweyn looga soo dhoweeyey, waxayna kulamo laqaateen qaybaha bulshadda ee deegaanka Dan-Dan.
Waftiga Ayaa Islamarkaaba u anba baxay Deegaanka Xamarlagu xidh oo ahaa meeshii socdaalkoodu ku wajahnaa, dadweynaha ku nool deegaanka xamarlagu Xidh ayaa Kaga horyimid meel hilaadii 10 kM u jirta magaaladda, iyagoo wata gaadiidka noocyadiisa kala duwan.
Dad weynihii kasoo qaybqaatay soo dhoweynta ayaa waxaa ka mid ahaa, Cuqaal,Waxgarad, dhalinyaro, Haweeb,Arday, Iyo dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshadda Xamar Lagu xidh.
Salaan Iyo soo dhoweyn ay kala qaateen waftiga iyo dadkii soo dhoweynayey, Kadib waxaa waftiga loo gelbiyey goob loogu tala galay in ay ku nastaan, waxayna muddayar kadib shir isugu yeereen qaybaha kala duwan ee bulshadda halkaas oo ay isku xogwaraysteenw aftiga wasiirka iyo dadka deegaanku.
Waftiga Iyo waxgradka deegaanka xamarlagu xidh ayaaisla sooqaaday arimo dhawr ah, kuwaasoo ay ka mid ahayd sidii magaladda xamarlagu xidh loogu magacaabi lahaa degmo.
Hadaba Wasiirka ayaa shir kadib wuxuu kormeeray dhamaan xarumaha arimaha Bulshadda sida Goobaha waxbarashadda, Caafiaadka IWM
Gaba gababadiina wasiirka ayaa dad weynaha reer xamarlagu xidh u balanqaaday, uu uu warbixintooda gaarsiinayo, dawlada dhexe ee puntland, islarkaana uu gubindoona waxyaabihii ay ku arkeen deegaanka.
Maaha markii ugu horeysey oo safar kan la mid ah uu wasiirku ku tago deegaano hoosyimadda buuhoodle, dhowaan ayay ahayd markii safar kan la mid ah uu ku tegey, degmadda xadhadhan oo kamid ah degmooyinka gobolka cayn.
Iskusoo wada duuboo Safarka uu Wasiirka Kalluumaysiga Iyo Khayraadka Badda Puntland ku marayo gobolka cayn, ayaa lafilayaa in uu sii socdo maalmaha todobaadkan aynu kujiro.
Cudurada duumada, shubanka & oofka oo la soo darsay bulshada gobolka Cayn iyada oo lagu jiro xilli roobeed.